Mpanoratra: Mohammad Faali
Ny Aero L-39 Albatros dia fiaramanidina mpamily fiaramanidina mivoatra ao Tsekôslôvakia mba hamenoana ny fepetra takiana amin'ny "C-39" (C for cvičný - trainer) mandritra ny 1960s hanoloana ny L-29 Delfín. Izy io no voalohany tamin'ireo mpanazatra jet faharoa, ary ny mpanamboatra fiaramanidina voalohany mpamokatra dia novokarina, ary navaozina taty aoriana toy ny L-59 Super Albatros sy ny L-139 (prototype L-39 miaraka amin'ny motera Garrett TFE731).
Ny fampivoarana bebe kokoa ny famolavolana, ny L-159 ALCA, dia nanomboka ny famokarana ao amin'ny 1997. Hatreto, mihoatra noho ny 2,800 L-39 dia nanompo tamin'ny tafika 30 manerana izao tontolo izao. Ny Albatros no mpanazatra amin'ny fiaramanidina be mpampiasa indrindra eran-tany; Ankoatra ny fampiofanana ny fiofanana momba ny fiaramanidina fototra, dia nirotsaka an-tsehatra koa ny asa fitoriana amin'ny fanaovan-jiro. Amin'ny lafiny iray, tsy mbola nahazo ny anaran'ny tatitra momba ny OTAN.
Fampidinana mahomby amin'ny alàlan'ny modely avo lenta, feo mahazatra, VC miaraka amin'ny refy sy switch (tsy misy panel 2D), miaraka amin'ny fanavaozana 3: Air Force Czech, Air Force ary Lituanian Biele Albatrosy. Mifanaraka amin'ny FSX ary Prepar3D (fanitsiana canopy.bmp texture)